China mpanamboatra fantsom-pamokarana fantsom-bokatra azo ampiasaina China Zhancheng
Tube famafazana viriosy
Ampiasaina indrindra izy io amin'ny fanangonana santionany, fitehirizana ary fitaterana mikraoba mifindra ao amin'ny lalan-pisefoana, lalan-dra mandevon-kanina ary santionany amin'ny jiro fanabeazana aizana. Ny fantsom-pamantarana virtoaly tsy mihetsika dia afaka mitazona hatrany ny maha-izy azy ny santionany. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fikajiana sy fikarohana ny viriosy, ary azo ampiasaina amin'ny fambolena sy ny fitokana-monina virus.
Miorina amin'ny Hank's, ny fampidirana BSA, antibiotika, asidra amine ary akora hafa mampiorina ny virus dia afaka mitazona ny asan'ny virus amin'ny maripana marobe, mampihena ny hafainganan'ny famotehana viriosy, ary mampitombo ny taham-pahafahana mitoka-monina viriosy.
Misy mpiaro ny viriosy, maharitra maharitra ny santionany. Ny fe-potoana fitehirizana dia 1 taona amin'ny 2-30 ℃. Ny swabs sy ny fantsom-panadinana dia manana tsipiriany feno hihaonana amin'ny scenario fampiasana isan-karazany. Ny fantsona santionany dia misy famehezana tsara, tsy misy famoahana, azo antoka ary azo antoka.
OEM & ODM koa dia manaiky amin'ny fangatahan'ny mpanjifa.
Fanangonana ohatra amin'ny alàlan'ny Teknolojia Swlocked Flocked
Ny diagnostika tsara kokoa dia manomboka amin'ny santionany tsara kokoa, ary ny santionany tsara kokoa dia azo amin'ny fampiasana fomba fanangonana santionany.
Cleanmo Flocked Swabs dia ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany. Ny fampiasana mahazatra Flocked Swabs dia ho an'ny santionan'ny nasofary
Ny tsiambaratelo misy rano dia voadona haingana eo anelanelan'ny kofehy perpendicular amin'ny alàlan'ny hetsika capillary.
Ahodino in-droa na intelo ny savony, ary tazomy amin'ny toerany mandritra ny 5 segaondra ny fehin-kibo, mba hahazoana antoka fa hitroka be ianao.
Hydraulika kapila matanjaka eo anelanelan'ny kofehin'ny Nylon dia manatsara ny fanangonana santionany misy rano.
Ataovy ao anaty salantsalohan'ny fitaterana ny fehin-kibo ary vakio ny vatan-tsambo eo amin'ny sisin-dàlana nolokoina.
Ny santionany dia mivoaka ho azy sy mandeha ho azy satria mihazona eo akaikin'ny tampon-trano amin'ny rafitra misokatra tanteraka izy io.
Tsy manakana ny fihetsehana mikoriana izany, noho izany dia mivoaka ny santionany iray manontolo.
Tube fakan-tahaka virus azo alefa-A1
Ampiasaina amin'ny fanangonana santionany, fitaterana sy fitehirizana, sns., Santionany mifangaro olona dimy na santionany mifangaro amin'ny olona folo ho hitan'ny asidra niokleika
Tube santionan'ny virus azo ampiasaina-A2
Tube fakan-tahaka virus azo alefa-B1
Ampiasaina amin'ny fanangonana santionany, fitaterana ary fitehirizana sns
Tube fantsom-pamantarana virus-disposable azo alefa-B2
Teo aloha: Sambo fanangonana ra banga azo ampiasaina
Kopa santionany amin'ny laboratoara
Kopa santionany kely